Htc Desireafondo | Androidsis
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုးစားရန်ကံကောင်းသည် HTC Desire ရက်အနည်းငယ်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စက္ကူမည်သည့်အော်ပရေတာတွင်မဆို၎င်းကိုအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစျေးနှုန်းဖြင့်ရှာဖွေနိုင်ပြီး၎င်းကိုအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည်။ မင်းကိုထားခဲ့ပါ HTC Desire Unboxing နှင့်ယနေ့ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအချို့သောအတိုင်းအတာအထိကနှိုင်းယှဉ်ပါကအနည်းငယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်ခဲ့ရမည် Nexus Oneနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကောက်ချက်တင်ပြ။
El HTC Desire ကြေငြာလိုက်တဲ့အချိန်မှာငါတို့အားလုံးကိုအဲဒါလို့ခေါ်ကြပါတယ် Nexus One Htc မှ ​​Google သည်၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်ပြီး Htc သည် Desire ကိုရောင်းချခဲ့သည်။ အမြင်အာရုံသူတို့အကြားတည်ရှိပြီးအပြောင်းအလဲအနည်းငယ်ရှိကြောင်းနှင့်ပြည်တွင်း၌ဆင်တူပင်ပိုမိုကြီးမြတ်သောကြောင့်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိကမှန်သည်။
ငါပြောသကဲ့သို့, ပြင်ပရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်တူ၏အလွန်ဆင်တူသည် Nexus Oneဒီတစ်ခါလည်း Nexus One ထက်ပိုမို၎င်း၏အနားမှာ rounded ဖြစ်ပါတယ် HTC Desire။ မျက်နှာပြင် ၃.၇ လက်မရှိပြီး resolution အနေဖြင့် 3,7x480-pixel resolution ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး Amoled အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးကြေးဝါသတ္တုကိုယ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အောက်ခြေမျက်နှာပြင်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ္တုခလုတ်များနှင့် optical sensor တပ်ဆင်ထားသည်။ ဤခလုတ်များနှင့်အာရုံခံကိရိယာများသည် Nexus နှင့်၎င်း၏ထိတွေ့နိုင်သောခလုတ်များထက်ကောင်းမွန်သောအားသာချက်များဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အားမှန်ကန်စွာတုန့်ပြန်မှုပြုရန်အကြိမ်များစွာသင်တို့ထိရလိမ့်မည်။ trackball အဖြစ်အလုပ်လုပ်သော optical sensor သည်အခြားသူများယူဆောင်လာသည့်ဘုံဘောလုံးထက် sensitivity နှင့်ကိုင်တွယ်မှုတို့တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည် Android Terminal များ။ ရှေ့ခလုတ်များအပြင်၌ HTC Desire ၎င်းတွင် volume တစ်ခုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်လျှော့ချခြင်းအတွက်သော့များဖြင့်တစ်ဖက်တွင်ရှိပြီးအထက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် on နှင့် off ရှိသည်။
၏နောက်ကျော HTC Desire ၎င်းသည်အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သောပလပ်စတစ်တစ်လုံးဖြစ်သည်။ အဖုံး၏အရည်အသွေးသည် Nexus One ထက်များစွာနိမ့်သည်နှင့်သေးငယ်သည့် tabs များဖြင့်ဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ဖွယ်ရှိပြီးအချို့ကိုအဓိပ္ပါယ်မရှိဘဲချိုးဖျက်နိုင်သည်။ နေ့တိုင်းဖုန်းဖွင့်မည်မဟုတ်သည်မှာမှန်ပါသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် HTC Desire ၎င်းသည်ထိပ်ပိုင်းတွင် audio output အတွက် ၃.၅ မီလီမီတာအပေါက်တစ်ခုနှင့် PC ကိုအားသွင်းရန်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်အောက်ခြေရှိ micro usb port ရှိသည်။
၏အရွယ်အစား HTC Desire ထုတ်လုပ်သူက ၁၁၉x၆၀x ၁၁.၉ မီလီမီတာအရ ၀.၀၄ မီလီမီတာသာထူသည် Nexus Oneလက်၌၎င်းသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားကွဲပြားခြားနားမှုများစွာရှိသည်ဟုခံစားရသော်လည်း Htc Desire သည်ပိုမိုကြီးမားပုံရသည်။ သို့သော်ဆန့်ကျင်စွာပင်, အနည်းငယ်ပိုစတုရန်းဖြစ်ခြင်းကကိုင်ထားရန်ပိုမိုအဆင်ပြေစေသည်။
သင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည့်အတိုင်းမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကြောင့်၎င်းသည်သေးငယ်သည့်ဖုန်းမဟုတ်ဘဲအလွန်ကြီးမားသည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏လက်၊ ဂျာကင်အင်္ကျီသို့မဟုတ်ရှပ်အင်္ကျီအိတ်ကပ်ထဲ၌သယ်ဆောင်ရန်စိတ်ရှုပ်စရာမဟုတ်ပါ။ အလေးချိန်မှာဘက်ထရီအပါအ ၀ င် ၁၃၀ ဂရမ်ခန့်ရှိသည်။
မျက်မှန်မှာလှပသော terminal တစ်ခုဖြစ်ပြီးဖန်ပတ်လည်ရှိသတ္တုစပ်သည်အခြားဖုန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၄ င်း၏ဂုဏ်သတ္တိကိုပေးသည်။
ပြင်ပအသွင်အပြင်ဟာအကြားအလွန်ဆင်တူသည်ဆိုပါက HTC Desire နှင့် Nexus Oneဖြစ်နိုင်လျှင်အပိုင်းအပိုင်း၌တူညီသည်။ The HTC Desire ဒါဟာရှိပါတယ် Qualcomm Snapdragon QSD8250 1Ghz ပရိုဆက်ဆာ မြန်နှုန်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်တွင် RAM 576Mb နှင့် ROM 512Mb ရှိသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဖုန်းများအကြား hardware hardware ရှုထောင့်၊ 64 MB RAM ရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်ရှိနိုင်သည် HTC Desire ဒီထက်ပိုပြီးရှိတယ် Nexus One။ သိုလှောင်မှုအတွက် memory ကို 32 GB အထိသိုလှောင်နိုင်သည့် micro SD ကဒ်များဖြင့်ချဲ့ထွင်နိုင်သည်။
၎င်းသည် Wi-Fi 802.11b/ g ကွန်ရက်များ၊ Bluetooth 2.0 + A2DP နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ၏ဖြစ်ရပ်၌ရှိသကဲ့သို့ Nexus One 802.11 n Wi-Fi ကွန်ယက်များနှင့်အနာဂတ် software update မှတဆင့်သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည် HTC Desire ၎င်းတွင် chip တူညီသည်။ သီအိုရီအရ၎င်း update ကိုလက်ခံရရှိသရွေ့သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်။
၎င်းကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည့်ကွန်ယက်များသည် 3G ဖြစ်သည်။ Download သည် 7,2 Mb / s နှင့် upload အတွက်2Mb / s, GPRS, EDGE နှင့် GSM / HSPA / WCDMA တို့ပါဝင်သည်။
သောကင်မရာ HTC Desire ၎င်းသည် autofocus နှင့် flash ပါသော5Mpx ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာမျက်နှာထောက်လှမ်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်၊ geotagging နှင့် panoramic photos များလည်းပါ ၀ င်သည်။ ကင်မရာစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ပိုမိုပြည့်စုံသည်ဟုမှတ်ချက်ပေးပါက၎င်းကိုသီးခြားစာမူတစ်ခုတွင်ကိုင်တွယ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း HTC Desire အဆိုပါ Nexus One.
ဘက်ထရီသည်အားသွင်းနိုင်သည့်စွမ်းရည် 1.400 mAh ရှိပြီးထုတ်လုပ်သူအရ GSM / WCDMA ကွန်ယက်များတွင်မိနစ် ၄၀၀ ခန့်စကားဝိုင်းပြောဆိုနိုင်ပြီး GSM / WCDMA ကွန်ယက်များတွင်နာရီပေါင်း ၃၅၀ နာရီအသင့်စောင့်ဆိုင်းနိုင်သည်။ အဆိုပါဘက်ထရီစွမ်းရည်၏၏တူညီသည် Nexus One ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကစမ်းသပ်ပြီးသောအချိန်၌သူကပိုကောင်းတဲ့ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုကိုစီမံခန့်ခွဲပုံရသည်ဟုဆိုရပေမည်။ သေချာတိကျစွာပြောရသော်လည်းအသေးစိတ်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
တစ် ဦး ကကြီးမားတဲ့ခြားနားချက် Htc Desire ကို Nexus One နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည် ၎င်းတွင် built-in FM အလုပ်လုပ်သော FM ရေဒီယိုအသံလွှင့်ကိရိယာတစ်ခုရှိသည်။ ရေဒီယိုမရှိခြင်းသည် software အတွက်သာဖြစ်သောကြောင့် Nexus ထိခိုက်လိမ့်မည်ဟုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသော update တွင် hardware ပိုင်း၏ဤအပိုင်းကို enable လုပ်ထားပါကဤခြားနားချက်သည်ဘာမျှမဖြစ်လာနိုင်ပါ။
ဤအမျိုးအစားရှိလက်ရှိဖုန်းများနည်းတူ၎င်းတွင်သံလိုက်အိမ်မြှောင်၊ အရှိန်လျှော့ကိရိယာ၊ အနီးကပ်အာရုံခံကိရိယာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းအာရုံခံကိရိယာများရှိသည်။
အခြားပို့စ်တွင်တွေ့ရမည့် software (သို့) interfaces ၏မေးခွန်းများမပါပဲ HTC Desire အရှိဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်း - အစွန်းဟာ့ဒ်ဝဲရှိပါတယ် Android Terminal များ စျေးကွက်ထဲမှာ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များနှင့်ထိတွေ့မှုအာရုံခံကိရိယာတို့ပါ ၀ င်သည်။ သိုးပေါက်ငယ်သောခြားနားချက်အပြင်အဆုံးတွင်ကွဲပြားမှုသည်၎င်းထက် Nexus One.
ဒါကို Xperia X10 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကြည့်ပါ အန်းဒရွိုက်ဖုန်းများ, ဤအမှု၌, တစ် ဦး နှင့်အခြားအကြား Ram ၏ကြီးမားသောခြားနားချက်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ Xperia X10 ၏မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားသည်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သော်လည်းမျက်နှာပြင်အရွယ်အစား ၀.၃ လက်မနှင့်ကင်မရာကွဲပြားမှုတွင် ၃ Mpx ရှိခြင်းသည် Htc Desire ထက် HAM ၏ Desire Desire 0,3 MB ထက်ပိုမိုလျင်မြန်သောပမာဏသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုထောင့်မှကြည့်ခြင်းဖြစ်သည် သူ့ကိုဆီသို့ HTC Desire.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » နက်ရှိုင်းသော HTC Desire
ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တစ်ခုမှာငါနားလည်တဲ့ Legend ရဲ့ကင်မရာဟာ Desire လိုအတူတူပါပဲ၊ X10 ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလုပ်ခဲ့တယ် သို့တိုင် 3Mpx ပိုများပါသေးသည်။
Esperaréala Desire pues…
ငါ Desire အကြောင်းစဉ်းစားနေခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုပထမ ဦး ဆုံးရချင်တဲ့အတွက်မေလထဲမှာ Vodafone နဲ့ Nexus One ကိုဝယ်တော့မယ်။ Legend မှာဖော်ပြထားတဲ့စျေးနှုန်းအတွက်တော့ငါပေးရ ဦး မယ်ထင်တယ်။
Hispalis အားဖြင့် Bigger ကိုပြန်ကြားပါ
ဒီနှစ်ခုထဲကတခုကိုငါဆုံးဖြတ်ရမယ်၊ ငါက FM ရေဒီယိုကိုတော်တော်များများသုံးတယ်၊ nexus မှာဒီကိုမဖွင့်ထားဘူး၊ နောက်ဆုံးအခြေအနေအကြောင်းအများကြီးပြောထားတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါဟုတ်သလား၊ ရက်စွဲများ, စသဖြင့်
နောက်တစ်ခုက vodafone နှင့်အတူ google nexus ထွက်လာတဲ့အခါမှာ google map navigation သည်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒါက htc ရဲ့ဆန္ဒကဘာမှမပြောခဲ့ဘူး။
နောက်ထပ်ပြissueနာတစ်ခုမှာ updates အသစ်များဖြစ်သည်။ Nexus တစ်ခုတွင်၎င်းသည်၎င်းတို့ကိုပထမ ဦး ဆုံးလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး htc အလိုရှိသလား၊ htc hero နှင့်အတူတူမူဝါဒနှင့်အတူတူဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ကိုမသိပါ။
Responderagofa
အဆင့်မြှင့်တင်မှုကို Htc သို့မဟုတ် Google မှအတည်ပြုခြင်းမရှိပါ။ Nexus One ကိုနည်းပညာဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုသို့ယူဆောင်လာသောအခါအသုံးပြုသူမှသူသည်မကြာမီတွင်မွမ်းမံမှုတစ်ခုပြုလုပ်တော့မည်ဟုပြင်သစ်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကပြောကြားခဲ့သည်။ ဂူးဂဲလ်မှလမ်းညွှန်မြေပုံကိုစပိန်နိုင်ငံသို့ယူဆောင်လာမည်ကိုတရားဝင်ပြောကြားခြင်းမရှိကြောင်းဗြိတိန်တွင်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ အကယ်၍ စပိန်နိုင်ငံတွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပါက၎င်းသည် Android terminals အားလုံးအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မော်ဒယ်နှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ၎င်းသည်မြေပုံကုမ္ပဏီနှင့်ဂူဂဲလ်တို့၏တရားဝင်ပြproblemsနာဖြစ်သည်။ Nexus ဟာ ၁၀၀% နီးပါးသေချာတာကတော့အရင်မွမ်းမံမှုများရှိလိမ့်မည်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ
«La inclusión de botones físicos y el sensor táctil, además de la pequeña diferencia de ram, pero diferencia al fin y al cabo, lo hacen más potente que el Nexus One.»
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များနှင့်ထိတွေ့သည့်အာရုံခံကိရိယာသည်အဘယ် အချိန်မှစ၍ ပိုမို၍ စွမ်းအားကြီးမားစေသနည်း။ အဆိုပါမှတ်ဉာဏ် pfff ဖြစ်စေ, ဒါပေမယ့်သူကဖြစ်စေ, အလုပ်လုပ်တယ်, ဒါပေမယ့်အခြားအရာငါ့ထံသို့ရယ်စရာပုံရသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များသည်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုသောကြောင့်၎င်းတွင် optical trackball ရှိခြင်းကြောင့်လည်းအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ Nexus တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ trackball တစ်ခုရှိသည်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုက်နှစ်သက်သူများသည်၎င်းကို၎င်းနှင့်အခွံချွတ်သူများကမြင်တွေ့လိမ့်မည်။ ငါတို့အဲဒါကိုပယ်ဖျက်ပါလိမ့်မယ်။
ဆိုလိုတာကတစ်ခုတည်းသောလုံးဝအားသာချက်ကတော့အပို RAM ပါ။
Hola Javier. El tener los botones físicos no es subjetivo, llevo casi tres meses usando el nexus one y te aseguro yo y más gente que tienen el nexus, que los botones táctiles que trae son una mier…, por lo que el no tenerlo así es una ventaja y grande, eso no es subjetivo es muy objetivo. El sensor óptico es mucho más sensible y fiable que la bolita física, lo digo yo y mucha gente más que también lo ha probado en los dos terminales y tampoco es subjetivo, es totalmente objetivo. Si tu has probado los dos terminales lo sabrás.
64 mb ram ခြားနားချက်သည်သင့်အတွက်အနည်းငယ်သာထင်ရလျှင် terminal တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား RAM သည် 13% ကွာခြားမှုရှိသည်။ ကျွန်တော်ဒီ Terminal မှာရှိတဲ့ ram ပမာဏတော်တော်များများအများကြီးရှိတယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒီမှတ်ဉာဏ်ကိုဒီ Terminal အားလုံးကအသုံးပြုတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များ၊ optical sensor နှင့်တပ်မက်မှုသည်ဆန္ဒထက်ပိုမိုသောပမာဏရှိခြင်းကြောင့်၎င်းကိုပိုမိုအားကောင်းစေသည်။
RAM (64MB) HTC သည် Sense ရှိခြင်းဖြင့်၎င်းကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်ဟုဆိုလိုသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည် Eclair ၏ထိပ်တွင်အခြား interface တစ်ခုထည့်ထားကြောင်းသတိမပြုမိစေရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဒါဟာအားသာချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သူတို့က Sense ကို run ဖို့ RAM ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားပါတယ် (N7 ရဲ့ ၅ မျက်နှာအစား ၇ မျက်နှာပြင်) ။ ငါမွမ်းမံမှုများရှိခြင်းများအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုက်ကူး။ ဒါကငါ Gofa ထင်သောအရာကိုပါပဲ။
Las actualizaciones las tendrá antes el Nexus, eso está claro 🙂
@gofa ကောင်းပြီ၊ ငါဟာသင်နဲ့တူနေတယ်။
Desire ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များနှင့်၎င်း၏ optical sensor သည် touch ခလုတ်များနှင့် Nexus ၏ဘောလုံးထက် ပို၍ နှစ်သက်သည်။ ငါ Desire ၌ရှိသည့် 64 MB MB RAM ပိုကြိုက်သည် (ယခုအချိန်တွင်၎င်းတို့သည် X10 သို့မဟုတ် Milestone ကဲ့သို့ပြိုင်ဘက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် RAM များများစားစားရှိသော်လည်း)
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် Nexus သည်နောက်ဆုံးသတင်းများအားလုံးကိုလက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် HTC သည် Sense ဗားရှင်းအသစ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက် (Desire Desire များမှရရှိလိမ့်မည်ကိုသိရှိထားခြင်းဖြစ်သည် (သူရဲကောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်မှာလများကြာနိုင်သည်) ကိုရွေးချယ်ရန်သံသယဖြစ်စေသည်။ ဆန္ဒ။ Nexus တွင်အနာဂတ်ရေဒီယိုတွင် FM ရေဒီယိုရှိလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ အကြောင်းမှာချစ်ပ်က၎င်းကိုခွင့်ပြုထားသည်။ HD တွင်လည်း Desire လက်ခံရရှိမည့်အလားတူ update နှင့်လည်း HD အသံသွင်းနိုင်သည်ဟုကောလဟာလများထွက်ပေါ်နေသည်။ ထို့အပြင် HTC HD2 တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သကဲ့သို့နောင်အသစ်ပြောင်းခြင်းများအတွက် RAM ပိုမိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်မလားကိုမည်သူသိသနည်း။
En mi caso, creo que al final me decidire por el Nexus, ya que aunque el Desire se pueda actualizar con ROM’s cocinadas poco despues de que se actualice el Nexus, por lo menos mientras dure la garantia del terminal no me gustaria tener que recurriraellas por temoraperderla. La decisión definitiva la tomare cuando se sepa el precio de los dos para las portabilidadesaVodafone (aunque me temo que serán parecidos los precios y la duda seguirá).
ငါမဆွေးနွေးရသေးသောထင်သောအရေးကြီးသောအရာတစျခုရှိပြီး၊ N1 သယ်ဆောင်သည့်ဆူညံသံကိုပယ်ဖျက်သည့်မိုက်ကရိုဖုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖုန်းကောင်းတစ်လုံးဖြစ်ရန်အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှသိသိသာသာတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘောလုံးသည်မူအမှန်တရားမှာတစ်ခါတစ်ရံအလွန်တိကျမှုမရှိသော်လည်းသင့်အားလွဲချော်နေသောမက်ဆေ့ခ်ျများ (သို့) ခေါ်ဆိုမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားအကြောင်းကြားရန်အချက်ပြလိုက်ခြင်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သည် (မကြာမီမတူကွဲပြားသောအရောင်များဖြင့်)
En cuantoalas actualizaciones, HTC ya me ha dejado colgado unas cuantas veces…..
Responderaquique13
Si lo hace Roberto.